सबै मान्छे ओलीतिर पठाएर वामदेवले एकताकाे भ्रम छर्ने ? : माधव नेपाल - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > सबै मान्छे ओलीतिर पठाएर वामदेवले एकताकाे भ्रम छर्ने ? : माधव नेपाल
January 17, 2021 January 17, 2021 Nepal Correspondent70
नेपालगञ्जमा आइतबार आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणमा अध्यक्ष नेपालले उपाध्यक्ष गौतमले आफू नजिकका व्यक्तिलाई ओलीतिर लगाएर एकताको भ्रम छर्न खोजेको आरोप लागएका हुन्।
नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्तामा पुग्नका लागि पार्टी एकतालाई सिँढीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष नेपालले ओली तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाए। नेपालले विगतमा आफू र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सामान्य समस्या आउँदा राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै अहिले ओलीले पार्टीमा बहुमत गुमाएको अवस्थामा राजीनामा दिनु नै उत्तम हुने बताए।
ओलीलाई विश्वंशकारी भन्दै नेपालले ओलीले बालुवाटार छाड्ने बेलामा ध्वस्त पार्न सक्ने बताए। नेपालले भने, ‛हामीले यस्तो विध्वंशकारी मान्छे पाएको छौं, केपी ओलीले बालुवाटार छाड्ने बेलासम्ममा मुलुक ध्वस्त पार्न बेर छैन।’